Ihe ọgụgụ isi, n'efu maka obere oge | Esi m mac
Enwere ọgụgụ isi, n'efu maka obere oge
Imirikiti ndị ọrụ, belụsọ na ha nwere mmasị na foto, akwụsịla iche ihe kachasị mma iji see foto, kama na ka ha na-ese igwefoto ha na-ese foto. Mgbe e mesịrị, mana ọ bụghị n'oge ịme ya, ha na-achọpụta na ikekwe ha gaara agagharị n’aka ekpe ma ọ bụ aka nri iwepụ otu ihe ma ọ bụ mmadụ nke na-amachaghị nke ọma. Iji kpochapụ ụdị a mmerụ ahụ, anyị nwere ike ịbanye na ngwa dị iche iche anyị nwere ike ịchọta ma na Storelọ Ahịa na Mac App Store. Taa, anyị na-ekwu maka otu n'ime ha dị maka nbudata n'efu maka obere oge: ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi.
Ndị nwere ọgụgụ isi nwere ọnụahịa oge niile na Mac App Store nke 4,99 euro na ọ na-enye anyị ohere iwepu na ọbụna ibugharịa ihe n'ime foto. Ngwa a dị mma maka iwepu akara mmiri ma ọ bụ ihe / ndị mmadụ na-ekwesịghị ịpụta na foto ahụ. Ndị nwere ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi na-enye anyị ohere ịhụ nsonaazụ ikpeazụ tupu ịme mgbanwe ikpeazụ ya, yabụ anyị nwere ike ịhọrọ iji gosi mgbanwe ndị ahụ ma ọ bụ ịhapụ ya otu ọ dị. Ngwa a na-enye nsonaazụ dịgasị iche, dabere na ndabere ya, ịtọ ụtọ na azụ, nsonaazụ kacha mma ọ ga-enye.
Ọ bụrụ na ndabere dị mgbagwoju anya dịka osisi, ndị mmadụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-enye anyị agba dị iche iche, ọ bụghị ụda, nsonaazụ na-ahapụ ọtụtụ ihe achọrọ. Mana ihe dị mkpa bụ na ngwa a, nke nwere ike ịzọpụta anyị na ihe karịrị otu oge, dị maka n'efu, yabụ na ị gaghị eche echiche ugboro abụọ mgbe nbudata ya ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzọpụta 5 euro na o nwere dị ka a na-emebu price. Never maghị mgbe anyị ga-achọ ya yana, ọ bụrụ na Photoshop bụ ngwa nke anyị maara naanị aha karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Enwere ọgụgụ isi, n'efu maka obere oge
Obi ụtọ Mujjo Sleeve maka MacBook Pro ọhụrụ
Tim Cook na onye ahịa Apple nwere Cerebral Palsy kwuru okwu na Glasgow n'ihi nnweta ụlọ ọrụ ahụ